Sat, Jul 21, 2018 | 21:34:22 NST
माघ २८ – महिलाको खानपिन तथा लवजलाई लिएर धेरै पटक बयानबाजी भएको छ ।
चोर पत्ता लगाउन मैनबत्तीले हात पोलेपछि
माघ १३ – भारतका प्रहरीले १३ जना विद्यार्थीलाई मैनबत्तीको लप्कामाथि हात राख्न लगाएर दण्ड दिने एकजना प्रधानाध्यापिका विरूद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन ।
योगेश भट्टराईले किताब लेख्न सल्लाह दिएपछि देउवाले खाना खान निम्तो दिए !
काठमाडाैं, माघ १७ -प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई मंगलबार एउटा कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा मञ्चमा सँगै भए ।
हप्तौँसम्म मृत मालिकको छेउमा कुरुवा कुकुर
पुस २२ – हंगेरीमा एउटा कुकुरले निधन भएकी मालिकको छेउमा बसेर हप्तौँ बिताएको छ । बुडापेस्टमा रहेको फ्ल्याटमा जाजा नाम गरेको ९ वर्षको कुकुर निधन भएकी आफ्नी मालिक्नीको छेउमा बसेको अवस्थामा बुधबार भेटिएको हो ।
​मालिकको परेवा बचाउन बाँदरले दियो ज्यान
मंसिर ८ – कलकत्तामा एउटा बाँदरबारे समाचार सार्वजनिक भएको छ जसले बाँदरप्रतिको तपाईँको दृष्टिकोण बदल्न सक्छ । कलकत्ताका एउटा बाँदर आफ्नो मालिकको लागि चोरहरुसँग भिडेको खबर दैनिक जागरणले जनाएको छ
जनकपुरधाम, मंसिर ५ - भैँसीले एउटा टाउको र चार वटा खुट्टा भएको पाडापाडी जन्माएको सबैलाई थाहै होला । तर धनुषामा भैँसीले दुई वटा टाउको र आठ वटा खुट्टा भएको पाडी जन्माएको छ ।
बाँदरले मोटरसाइकलको पेट्रोल चोरेपछि स्थानीय हैरान !
कात्तिक २६ – भारत हरियाणाको पानीपतका बाँदर भने तिर्खा लाग्दा पानी पिउँदैनन् । स्थानीय समाचार माध्यमहरुले पानीपतमा बाँदरले मोटरसाइकलबाट चोरेर पेट्रोल पिएको जनाएका छन् ।
कात्तिक ४ – भारतको मध्यप्रदेशको सुंद्रैलमा बस्ने ७५ वर्षकी सरस्वती बाईले ६० वर्षदेखि मुखमा एउटा दाना पनि अन्न हालेकी छैनन् ।
​यिनले खिचे नौ वर्षसम्म हरेक दिन सेल्फी, अन्तिम सेल्फी विशेष (भिडियोसहित)
भदौ २४ – उनले आफूमा आएको परिवर्तनलाई रेकर्ड गर्न दैनिक रुपमा सेल्फी खिच्ने गरेका थिए । उनले नाै वर्षसम्म हरेक दिन सेल्फी खिचे ।
​यसरी खेलियो टमाटरले होली, १६५ टन टमाटर सडकमा
भदौ १६ – यो फेस्टिभलमा एक अर्कालाई टमाटरले हानिन्छ । तर हान्नुभन्दा पहिला टमाटरलाई थिच्नु अनिवार्य हुन्छ । आउनुहोस् यस वर्षको टोमेटिना फेस्टिभलका केही तस्बिरको मज्जा लिऔँ ।
सबैलाई रुवाउने कश्मीरी बालिकाको यो तस्बिर
भदौ १४ – कश्मीरमा भारत–पाकिस्तान विवाद तथा चरमपन्थी र सुरक्षाकर्मीबीचको भिडन्तका घटना प्राय हुने गरेका छन् । यसको मर्कामा सबैभन्दा बढी कश्मीरका बालबालिका परेका छन् । केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा यो विषयमा चर्चा भइरहेको छ । कारण हो, एक बालिकाको मार्मिक तस्बिर ।
दक्षिण अफ्रिकामा मान्छेको मासु खाएको आरोपमा ५ जना पक्राउ
भदौ १३ – दक्षिण अफ्रिकाको क्वाजुन्जु–नटाल प्रान्तको शायामोया गाउँमा टाउको बिनाको लास भेटिएपछि खैलाबैल मच्चियो । गएको जुलाईदेखि बेपत्ता भएका २५ वर्षका जोनेल लाशवेयो लास टाउको नभएको अवस्थामा भेटिएको हो ।
विवाह भएको भोलिपल्टै एक दम्पतीको मृत्यु
साउन २६ – अमेरिकामा एक दम्पतीको विवाह भएको एक दिन बित्न नपाउँदै ज्यान गएको छ । कान्सास राज्यको अदालतमा उनीहरुको विवाहको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर श्रीमान–श्रीमती घोषित भएको एक दिन बित्न नपाउँदै दुर्घटनामा ज्यान गएको हो ।
पोज दिन संसारकै सिपालु ​स्वयम्भूका बाँदर
तर क्यामरा देखेपछि बाँदरले पनि पोज दिन्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्ला । अचम्म नमान्नुस, नेपालकै बाँदरहरु संसारकै फोटोजेनिक भएको बजफीड डट कमले जनाएको छ ।
विवाह सकिए लगतै दुलहीले दुलहाको टाउकोमा बन्दुक तेर्स्याइन्
साउन १८ – विवाहको केही समयपछि नै श्रीमानमाथि गोली प्रहार गर्ने अमेरिकाको टेनिसी राज्यकी एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
मस्तिष्कको अपरेशनको क्रममा बिरामीले गितार बजाइरहे
साउन ७ – भारतका एक व्यक्तिले आफ्नो मस्तिष्कको शल्यक्रिया भइरहेका बेला गितार बजाएका छन् । बैंग्लोरका अभिषेक प्रसादले शल्यक्रिया अवधिभर गितार बनाएका हुन् ।
‘आफ्नो बिहेमा मरिसकेको छोरो भेटेर अचम्ममा परिन् दुलही’
अमेरिकाको अलास्कामा बिहेको बेला अचम्मको घटना घटेको छ । आफूले विवाह गर्न लागेको केटाले दिएको उपहारले दुलही बनेकी बेकी टर्नी दंग भइन्, उनको गला अवरुद्ध भयो ।
जाजरकोटमा भेडाले जन्मायो दुईवटा टाउका भएको पाठी
जाजरकोट, असार २७ – जाजरकोट भेरी नगरपालिका–९ पौरीका किसान गोरसिंह नेपालीले पालेको भेडाले अनौठो पाठी पाएको छ ।
महिला प्रतिबन्धित आइल्याण्ड विश्वसम्पदा सूचिमा
असार २६ – जापानको ओकिनोशिमा आइल्याण्ड विश्वसम्पदा सूचिमा सूचिकृत भएको छ । ओकिनोशिमा आइल्याण्ड जापानको प्राचिन तथा धार्मिक केन्द्र हो । यहाँ महिला जान पाउँदैनन् ।
यस्तो छ विश्वको सबैभन्दा नराम्रो कुकुर
असार १२ – अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको विश्वका नराम्रा कुकुरहरुको प्रतियोगितामा पहिलो पुरस्कार नेपोलिटन मास्टिफ प्रजातीको कुकुर मार्थाले जितेको छ ।
१००० फेसबुक लाइक्सका लागि यस्तो तस्बिर
असार ७ – अल्जेरियामा एक व्यक्तिलाई आफ्नो सानो छोरालाई अग्लो भवनको झ्यालबाट बाहिर झुण्डाएको आरोपमा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
सर्पको टोकाईपछि एक व्यक्तिले सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने इच्छा भएको भन्दै श्रीमतीलाई टोकेका छन् । श्रीमतीलाई डाक्टरले बचाएका छन् भने श्रीमानको ज्यान गएको छ ।
मयुरले फुटायो रक्सीका बोतल (भिडियोसहित)
जेठ २४ – सुन्दा अचम्म र जोक्स जस्तो लाग्न सक्छ, एउटा मयुरले रक्सी तथा स्याम्पेयनको बोतल फुटाएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको एक स्टोरमा पसेको मयुरले पाँच सय अमेरिकी डलर (५१ हजार पाँच सय रुपैयाँ) बराबरको रक्सी तथा स्याम्पेनको बोतल फुटाएको हो ।
वैशाख १३ – थाइल्याण्डका एक व्यक्तिले फेसबुक लाइभ गरेर छोरीको हत्या गरेका छन् । २१ वर्षका ती व्यक्तिले फेसबुकमा भिडियो लाइभ गरेर आफ्नी शिशु छोरीलाई झुण्ड्याएका हुन् ।
क्रिकेटमा यस्तो चमत्कार : ४ बलमा ९२ रन
क्रिकेटमा एक ओभरमा कतिसम्म रन बनाउन सकिएला ? ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटको विकाससँगै २०/२५ रन त सामान्य नै लाग्न थालिसक्यो । ६ बलमा ६ छक्का नै हान्न सके पनि ३६ रन मात्र बनाउन सकिन्छ । नोबल, वाइड भएमा अरु केही रन होला ।
अजिंगर लागुऔषध दुर्व्यसनमा फस्यो, लगियो सुधारगृह
चैत ३० – अस्ट्रेलियामा लागुऔषधको दुर्व्यसनमा फसेको अजिंगरलाई दुर्व्यसन मुक्त गराइएको छ । गएको वर्ष अस्ट्रेलियाका प्रहरीले क्रिष्टल मेथामफेटामिन ल्याबमा छापा मारेको थियो ।
आफैले बनाएको रोबोर्टसँग इन्जिनियरले गरे विवाह
चैत २३ – चीनमा एकजना इन्जिनियरले आफैले बनाएको रोबोटसँग विवाह गरेका छन् । चीनको हाङझाउका ३१ वर्षका इन्जिनियर झेङ जियाजियाले गएको वर्षको अन्त्यतिर एउटा रोबोट निर्माण गरेका थिए ।
बाटोको छेउमा दिसा गर्ने १७ जना पक्राउ, समाते एक अर्काको कान
जनकपुरमा खुल्ला ठाउँ र बाटोको छेउमा दिसा गरिरहेका १७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । खुल्ला ठाउँमा दिसा गरिरहेकै अवस्थामा धनुषाको सिनुरजोडाका १२ जना र जनकपुर मुजेलियाका ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
चीनः एकै गाउँका १६० दम्पतीद्वारा सम्बन्ध विच्छेद
फागुन २० – चीनको पूर्वी क्षेत्रको एक गाउँका एक सय ६० भन्दा धेरै दम्पतीले बढी क्षतिपूर्ति पाउनका लागि सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् ।